Wasaaradda Caafimaadka XFS oo la wareegtay Sharciga mihnadlayaasha caafimaadka qaranka. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Caafimaadka XFS oo la wareegtay Sharciga mihnadlayaasha caafimaadka qaranka.
Wasaaradda Caafimaadka XFS oo la wareegtay Sharciga mihnadlayaasha caafimaadka qaranka.
Wasaaradda caafimaadka ayaa maanta qabatay kulan ay ku soo dhaweynaysay saxiixidda sharciga golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka oo uu saxiixay Madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka, Xildhibaano ka tirsaan aqalka sare, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha sharciga iyo masuuliyiin kale ayaa ka qeyb galay kulanka oo loogu mahadcelinayey madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo saxiixay sharciga golaha xirfadlayaasha caafimaadka oo ay horey u meel mariyeyn xildhibaanada labada gole.
La taliyaha madaxweynaha ee arrimaha sharciga Abuukaate Keyse Saciid Cartan oo wasiirka Caafimaadka ku wareejiyay Dukumentiga sharciga Ayaa si kooban uga hadlay muhiimada sharcigan.
Senator Cismaan Maxamuud Dufle ayaa sharaxay marxaladihi uu soo maray Sharciga golaha mihnadlayaaaha caafimaadka oo soo biloowday 2014.
Wasiirkii ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Axmed Xuuseen Macallin Ayaa xusay In sharcigan uu muhiim u yahay dhamaan Umada Soomaaliyeed.
Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulsahada Fowsiyo Abiikar Nuur Ayaa si faah faahsan uga hadashay muhiimadaha waaweyn ee uu xambaarsanyahay sharcigan.
“Waa sharci loo baahnaa waqtigiisa ayuuna ku yimid waana sharcigii ugu horeeyay waxaana sharcigaan uu kala saari doonaan yaa awood uleh dhaqtar yaase noqon karo ayay tiri wasiirka caafimaadka Fowsiyo Abiikar Nuur.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa dhaqan gelinta Sharciga golaha xirfadlayaasha caafimaadka oo wax badan kusoo kordhin doono Hanaanka Caafimaad ee dalka.
Previous articleWasiirka Waxbarshada XFS oo daah-furay shirka dib-u-eegista tayada Waxbarashada Dalka+(SAWIRRO).
Next articleDuqa Muqdisho iyo Wasiir Xamsa oo kawada hadlay horumarinta Ciyaahara dalka.